ဒီ ဗိုင်းရပ်(Virus) ကို ဒီလိုသတ်ပါ။ (hahaha Gtalk Virus !!! ) « လက်တွဲဖော်ချစ်သူ
Bookmark the permalink.	ဒီ ဗိုင်းရပ်(Virus) ကို ဒီလိုသတ်ပါ။ (hahaha Gtalk Virus !!! )
by ချစ်သူအတွက်	Gtalk မှာ အပေါ်ကမြင်နေရတဲ့ လင့်မျိုးဝင်လာရင်လုံးဝမနှိပ်မိပါစေနဲ့.. နှိပ်မိလိုက်ရင်သင်
ပါပဲနှင့် သူ့ဘာသာ hahaha photo Jpeg…is this you? ဆိုပြီး သူ့ဘာသာ ပို့ပါလိမ့်မယ်။
လိုက်ရင် ဂျီတော့ဟာ…ဖလန်းဖလန်းနဲ့ အစည်းအဝေးနောက်ကျလို့ ကဗျာကရာ ဟိုးပြေးဒီပြေး
ဒေါင်းရန် – http://www.mediafire.com/?mkm2jmy2m4z
၇.. ကွန်ပြူတာကို ရီစတတ်ချပါ။ ပြန်တက်လာလျှင်…အန်တီကို ပြန်ပြီး စကင်ဖတ်ပေးပါ။
← ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေခါနီး ဖတ်ဖို့။
ခေတ်ကုန်နေပေမယ့် အသုံးဝင်နေဆဲ နည်းပညာ(၁၀)ခု →